China 3T ityhubhu machine umatshini mveliso kunye nabathengisi | Iinkqubo zeHerbin Ice
Oluludaka machine ice
Ityhubhu ngumkhenkce ityhubhu
Umatshini wokupakisha i-Ice
Vimba umatshini womkhenkce
I-20T ityhubhu yomatshini weqhwa
10T Tube umatshini weqhwa
I-5T ityhubhu yomatshini weqhwa
3T ityhubhu umatshini ice
Amandla okubaleka: 9.375 KW.
Ubushushu beqhwa: Thabatha 5 ℃.
Umgangatho we-Ice: ngaphaya kunye nekristale.
Ice sangqa: 22mm, 29mm, 35mm okanye enye into.
Ifriji: R404a, R448a, R449a, okanye enye into.
Ukunikezelwa kwamandla: isigaba sesithathu sokubonelela ngombane.
Umthamo wemveliso yemihla ngemihla yeqhwa: 3000 kgs yemibhobho yomkhenkce ngeyure ezingama-24.
Imeko yokusebenza esemgangathweni: 30, kuma kunye nama-20 20 ubushushu bamanzi.
Ukusetyenziswa kwamandla: i-75 KWH yombane yokwenza iitoni ezi-1 zomkhenkce.
Ityhubhu yomkhenkce luhlobo lomngxuma ombombo ongashukumiyo enobubanzi obungaphandle ø22 、 ø29 、 ø35mm nobude obungu-25 ～ 42mm. Le sangqa umngxuma ngokuqhelekileyo ø0 ～ 5mm kwaye kuhlengahlengiswa ngokwexesha ekwenziweni ngumkhenkce.
Amanqaku: I-Tube yomkhenkce ityebile kwaye iyabonakala ekugcinweni kwexesha elide. Akunakwenzeka ukuba unyibilike ngexesha elifutshane. Umkhenkce weTyhubhu umhle kakhulu, kwaye unokuba ngaphaya kwe-100%, yikristale. Ijongeka intle kakhulu kwisiselo, ngesiselo.
Isicelo: Ukutya kwemihla ngemihla, isiselo sokupholisa, isiselo, ukugcina imifuno kunye nokutya kwaselwandle kutsha, njl.
Nazi izibonelelo eziphambili zomatshini wam weqhwa Tube.
Ikopi yezona zilungileyo kwaye zibhetele kunezona zibalaseleyo.
Ngokwahlukileyo kwezinye iifektri zomatshini womkhenkce, iinkqubo zeHerbin Ice zancama itekhnoloji yesiTshayina yemveli ityhubhu yetyhubhu ngo-2009. Siqala ukufunda nokuphanda itekhnoloji yeVogt yomkhenkce ukusukela ngo-2009.
Ngophando ngokuthe ngcembe kunye rhoqo kunye nophuhliso, ngoku sinokwenza oomatshini beetyhubhu zomkhenkce ngomsebenzi ogqwesileyo. Oomatshini bokwakha ii-Tube bazinzile kwaye banexesha elide kakhulu lenkonzo. Oomatshini bayasebenza kwaye bonga umbane kakhulu. Iityhubhu zomkhenkce ezenziwe ngoomatshini ziyabonakala, ziyikristale kwaye zihle.
Oomatshini banobuchwephesha bokugqibela betheyibhile yetekhnoloji. I-evaporators ixhotyiswe ngenzwa yesantya samanzi, esigcina inqanaba lolwelo elifanelekileyo. Yenza ubushushu bomphunga buphantsi kolawulo kakuhle. Ngeli xesha, sidibanisa isamkeli samanzi ngaphezulu kwe-evaporator, 2 ubushushu obutshintsha ubushushu kwiindawo ezifunekayo, ubonelelo lolwelo olumanzi, njalo njalo.
Isiguquli siya kuhlala sisebenza kweyona meko intle ngelixa ezinye ityhubhu zomatshini ityhubhu zomatshini waseTshayina zonakala ngokulula ngexesha lokuphambuka.
Ngombulelo kwitekhnoloji yethu ephezulu kunye noyilo lwenkqubo ehlakaniphileyo, sinokusebenzisa isiguquli esincinci ukufikelela kumthamo ofanayo womkhenkce. Oko kuthelekiswa nabanye oomatshini besiTyhubhu bomkhenkce. Ngecompressor encinci, ityhubhu yethu yoomatshini abasebenzisa umbane basebenzisa umbane omncinci ukwenza umlinganiselo ofanayo womkhenkce.
Masibala kunye ne-3T / ngosuku ityhubhu yomatshini weqhwa.
Abanye oomatshini bokupholisa ityhubhu yamanzi aseTshayina basebenzisa i-105KWH yombane yokwenza itoni nganye yomkhenkce.
Ityhubhu yam yoomatshini abasebenzisa ityhubhu badla kuphela ama-75KWH ombane ngokwenza iitoni enye zomkhenkce.
Umahluko wokwenza iitoni enye zomkhenkce yi-30KWH yombane.
Ke imihla ngemihla, umahluko wokusetyenziswa kombane ngama-30x3 = 90KWH.
(105-75) x 3 x 365 x 10 = 328,500 KWH, ngumahluko wokusetyenziswa kombane kwiminyaka eli-10.
Ukuba abathengi bakhetha umatshini wam we-3T / wosuku womkhenkce, baya konga i-328,500 KWH yombane kwiminyaka eli-10.
Ukuba umthengi ukhetha enye itekhnoloji engafanelekanga yomatshini weqhwa, uya kuchitha imali ethe kratya ukuhlawulela loo mbane usetyenziswayo, 328,500 KWH.
Yimalini nge-328,500 KWH yombane kwilizwe lakho?
I-328,500 KWH yombane imalunga ne-US $ 45,000 e-China.
I-80% yamacandelo kumatshini wam wetyhubhu yomkhenkce ziimpawu ezaziwayo zamanye amazwe njengeBitzer, GEA Bock, Danfoss, Schneider, njalo njalo.
Iqela lethu lemveliso elinobuchule kunye namava asebenzise ngokupheleleyo izinto ezilungileyo.
Oko kukuqinisekisa ngemigangatho elungileyo yoomatshini bokwenza ityhubhu ngomsebenzi ogqwesileyo.
Iwaranti yenkqubo yefriji yiminyaka engama-20. Ukuba inkqubo yokusebenza kwefriji iyatshintsha kwaye iba yinto engaqhelekanga kwisithuba seminyaka engama-20, siya kuyibhatala.
Akukho gesi ivuza imibhobho kwiminyaka eli-12.
Akukho zixhobo zefriji eziqhekezayo kwiminyaka eyi-12. Kubandakanywa icompressor / condenser / evaporator / valve valves ....
Iwaranti yokuhambisa iindawo, ezinje ngeemoto / iimpompo / iibheringi / izixhobo zombane, yiminyaka emi-2.
4. Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza.
Umzi-mveliso wam yenye yezona zinkulu e-China zizele ngabasebenzi abanamava.
Asidingi ngaphezulu kweentsuku ezingama-20 ukwenza enye okanye ii-3T / ngosuku ezininzi, 5T / ngosuku, 10T / ngemini ityhubhu oomatshini bokwenza umkhenkce.
Asidingi ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 ukwenza enye okanye ama-20T / ngosuku, 30T / ngemini ityhubhu yoomatshini bomkhenkce.
Ixesha lokuvelisa ngomatshini omnye kunye noomatshini abaliqela liyafana.
Umthengi akazukulinda ixesha elide ukufumana ityhubhu yoomatshini emva kokuhlawula.
Egqithileyo 2T flake umatshini ngumkhenkce
Okulandelayo: I-5T ityhubhu yomatshini weqhwa
Lwedilesi:China, EMpuma Asia